Fandraisana an-trano nomerika: Ahoana ny fomba hivarotana ny fanananao aorian'ny COVID ho an'ny fiverenana tsara | Martech Zone
Araka ny efa nampoizina dia niova ny vintana amin'ny tsena aorian'ny COVID. Ary hatreto dia toa mazava fa nifindra ho an'ny tompona trano sy ny mpampiasa vola. Raha mbola mitombo ny fangatahana fijanonana mandritra ny fotoana fohy kokoa sy trano honenana, na iza na iza manana adiresy — na trano fialan-tsasatra feno izany na efitra fatoriam-pialan-tsasatra fotsiny — dia tsara toerana hitrandrahana ny fironana. Raha mikasika ny fangatahana fanofana maharitra, saika tsy misy fiafarany.
Ankoatr'izay, tsy misy famatsiana eo imasony. Ny CEO an'ny Airbnb, Brian Chesky, dia nanambara izany mpandray vahiny 1 tapitrisa eo ho eo ilaina hamitana ny tinady eny an-tsena. Marina indrindra izany amin'ny trano aman-trano misy fianakaviana maro, sokajy 65% ​​an'ny fananana Airbnb. Trano maro-fianakaviana misy varavarana 40 na latsaka no nahita ny fiverenana tsara indrindra hatreto.
Ny risika ambany sy ny valisoa lehibe dia miandry ny tompona trano, na trano izany, asa tanana na portfolio feno fananana marobe. Na izany na tsy izany, ny angona, marketing, ary ny mandeha ho azy dia sakaizan'ny tompony. Ny teknikan'ny marketing taloha dia tsy hahatratra ny fiovan'ny tinady, ary ny tsy fahombiazany amin'ny fizotran-draharaha mavesatra ny asa - indrindra amin'ny fanofana trano fohy kokoa - dia mety hahatonga ny fampiasam-bola amin'ny tany atsimo. Miaraka amin'ny drafitra, fanomanana ary famatsiam-bola vitsivitsy azo tantanana, ny tompona trano dia afaka matoky fa napetraka tsara araka ny tokony ho izy ny fanofana ho an'ny fahombiazan'ny COVID.
Mandrosoa tongotra tsara indrindra
COVID-19 dia krizy eran-tany; ny vokany ary ny fiovan'ny fomba fijery dia iraisan'ny rehetra. Midika izany fa ny ankamaroan'ny vahiny taorian'ny COVID dia mitady zavatra mitovy, ary dingana voalohany lehibe ho an'ny mpampiantrano no manome antoka fa milamina ireo zavatra ireo. Ny lisitra dia tokony hanao dokam-barotra momba ny fanamafisana ny fanadiovan-tsonia eo anelanelan'ny vahiny, ary ny paikadin'ny fanadiovana ao anatin'ny fijanonan'ny vahiny. Ireo mpampiantrano izay misafidy ny fizotran'ny fanadiovana dingana dimy an'ny Airbnb dia mahazo fampisongadinana manokana ao amin'ny lisitr'izy ireo, izay taratry ny faniriana eo amin'ireo mpanofa manana izany karazana sary izany. Ny fikarakarana trano taloha dia zavatra nandeha tao ambadiky ny seho; Ankehitriny, ny vahiny dia te-hahita ny vahaolana ara-pahasalamana sy fiarovana mba hinoany ny fiarovana ny trano.
Ireo mpampiantrano dia tokony hitadidy ihany koa ireo fampitaovana ao an-trano rehefa manao doka ny lisitr'izy ireo. Nandritra ny volana maro, ny Internet tsy misy tariby dia iray amin'ireo fitaovana be mpitady indrindra eo amin'ireo mpandeha. Airbnb dia namoaka fanadihadiana iray izay nanehoana ireo mpampiantrano izay manampy toeram-piasana miasa amin'ny solosaina finday dia mahazo 14% mihoatra ny namany. Ny sary avo lenta amin'ny toeram-piasana malalaka - angamba kafe mifameno, mpanonta printy, fahaiza-manao haingam-pandeha haingam-pandeha - dia hisarika ny iray amin'ireo demografika sarobidy indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny COVID: ilay mpanofa trano.
Lisitra miaraka - Ny be kokoa
Ny fiovana dia nisy hatrany teo amin'ny tsena taorian'ny COVID. Raha tokony hiezaka handanjalanja ny tsena sy hiaritra ny vinavinan'ny fitadiavana ny vidiny mety ianao, ny tompona trano dia afaka manao fampiasam-bola matotra hamongorana ny aretin'andoha marketing. Ny varotra mandeha ho azy dia manao mora ny vidiny namboarina. Ireo mpampiasa vola sy tompona dia afaka mampiasa vola amin'ny haitao izay hanadihady ny tinady amin'ny tsena ary hanao lisitra ny fananana amin'ny haavon'ny vidiny sahaza sy ny halavany. Izy io dia afaka manova ny safidy roa, manintona olona maro kokoa izay manana filàna samihafa hatramin'ny faharetany na teti-bolany. Izy io koa dia afaka mitanisa ilay fananana mitovy amin'ny tranokala fanofana fotoana fohy, izay samy mitondra mpihaino hafa.
Ary miaraka amina rafitra marketing mandeha ho azy, zava-dehibe ny fanangonan'ny tompona sy ny mpampiasa vola angon-drakitra manodidina ny fomba fampisehoana ny lisitra tsirairay. Ny vavahadin'ny tompona dia mety ho toerana tsara handefasana tarehimarika manan-danja, hitazona ny lisitry ny vola miditra, ny tantaran'ny famandrihana, ny fandaniana ary ny fandoavam-bola amin'ny toerana iray. Ny mpampiasa vola dia afaka mahatakatra ny fahombiazan'ny tetika marketing isan-karazany, ary manara-maso ny modely momba ny vidiny sy ny halavany maharitra manintona ny ankamaroan'ny varotra ataony. Azon'izy ireo atao ny mandeha ho azy ny fandoavam-bola, mandrindra ny kaontiny ary manara-maso ny làlana ambany indrindra ary sady manangona ny refy ilaina: ny fivezivezena, ny vola miditra isam-bolana, sns.
The Passivity Aloavy-Off
Ny mpampiasa vola sy ny tompona very fotoana sy hery ara-tsaina rehefa manandrana manadino ny fihenan'ny vola ampiasain'ny mpanofa. Miakatra haingana ny fitantanana am-pahefana ny fanofana maharitra. Ny tompona dia manilika fanoratana an-tsoratra, fanamarinana ny vahinin'ny mpitsidika ary fanamarinana ID, fandoavam-bola ary fanadiovana eo anelanelan'ny fijanonana rehetra. Haingana noho izay mety kasain'ny tompony, ireo asa fitantanana ireo dia lasa asa manontolo andro, mitondra azy ireo lavitra ny tanjona hanombohana iraisana: ny fametrahana vola miditra.
Ny tompona dia afaka manambola indray mandeha amin'ny sehatry ny fitantanana fananana hanampiana azy ireo hitantana ny fahazotoany ary hanolotra traikefa avo sy tsy misy tanana ho an'ny vahininy. Ny rindranasa finday avo lenta dia afaka manampy ny vahiny amin'ny alàlan'ny fanamarinana ID virtoaly, ary hanatitra lakile fidirana an-tànana maimaimpoana ho azy ireo. Ny tompona dia afaka mahazo fiaraha-miasa amin'ny fitantanana mandritra ny dingan'ny turnover. Azon'izy ireo atao ny manombana azy io ho an'ny filàna fanadiovana sy fikojakojana azy ireo, ary azon'izy ireo atao ny mamoaka izany asa izany ho an'ny ekipa mpikarakara trano sy matihanina amin'ny fikojakojana. Ny fananana dia azo ekena amin'ny fomba azo ovaina mifototra amin'ny filana eo noho eo, mamela ny tompona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao rehefa misy ny fifanaovana.
Ny fananana mahomby indrindra amin'ny tsenan'ny post-pandemie dia ny fahafaha-misafidy. Ny fanofana trano vetivety dia ny mpamatsy vola akaiky indrindra. Ny olona dia mizaha toerana vaovao misy vidim-piainana ambany kokoa, mizotra amin'ny fanovana toerana ilaina indrindra, na fitsapana faritra vaovao miaraka amin'ny fahalalahany vaovao tsy hanana birao. Ny hofan-trano vetivety dia natao ho an'io hetsika taorian'ny valanaretina io. Izay manana tolotra fanofana - efitrano fatoriana ambonin'ny garazy na trano fialan-tsasatra manara-penitra - dia manana fotoana mahomby. Miaraka amin'ny varotra mandeha ho azy, ny fanomezana natokana ho an'ny vahiny, ary ny paikady amin'ny fitantanana fananana mandalo, ny tompon-trano rehetra dia hapetraka araka ny tokony ho izy handray anjara amin'ilay hazakazaka volamena aorian'ny pandemioma.
Tags: Airbnbbian cheskyCOVID-19krizy manerantanymultifamilyareti-mifindrafitantanana fanananavarotra sy hofa fananana mifakareal estate investemtnapps smartphone